Zvakaitika​—Basa Rakaitwa neZvapupu zvaJehovha Muna 2016
Mahofisi Makuru kuWarwick, NY
NYIKA yaSatani pairi kusangana nematambudziko akawanda, vanamati vaJehovha vechokwadi vari kuramba vaine “zvizhinji zvokuita mubasa raShe.” (1 VaK. 15:58) Mishumo inotevera inoratidza kuti Zvapupu zvaJehovha pasi rese zviri kuedza chaizvo ‘kuvimba naJehovha, kuita zvakanaka, uye kuita zvinhu nokutendeka.’​—Pis. 37:3.
Kutamiswa kweMahofisi Makuru neHofisi Yebazi
Pahofisi yekuWallkill, New York, pakawedzerwa zvimwe zvivako uye zvakapera kuvakwa musi wa1 February 2016, zvichiita kuti Dare reBazi rekuUnited States, Dhipatimendi Rebasa uye mamwe madhipatimendi, zviende ikoko. Uye nekupera kuri kuita basa rekuvaka mahofisi edu makuru kuWarwick, mhuri yeBheteri yakatanga basa rakakura chaizvo rekutama kubva muNew York City kuenda kunze kweguta.
Kubva musi weMuvhuro, 3 April 2017, vanhu vachange vava kukwanisa kuuya kuzoona zvakaita mahofisi edu makuru, uye vachange vachitenderera vachiona vega zvinhu zviri munzvimbo nhatu vozofamba vachiratidzwa zvakaita kumwe.
“Bhaibheri Uye Zita raMwari,” apa panenge pachiratidzwa maBhaibheri asingachanyanyi kuwanikwa uye pachiratidzwa kuti zita raMwari riri muMagwaro.
“Vanhu Vezita raJehovha,” apa panenge paine zvinhu zvinoratidza nhoroondo yenhaka yezvekunamata yeZvapupu zvaJehovha, zvinoratidza kutungamirira, kudzidzisa uye kuronga kwaiita Jehovha vanhu vake kuti vaite kuda kwake.
“Mahofisi Makuru​—Mabasa Anoratidza Kutenda,” apa pane mashoko anobudiswa achitsanangura basa remakomiti eDare Rinotungamirira uye kubatsira kwaanoita vanhu vaJehovha kuti vaungane pamwe chete, vaite basa rekudzidzisa muushumiri, vadzidze zvinhu zvine chekuita nekunamata uye kuti varatidzane rudo.
Munokwanisa kufamba mega muchiona nzvimbo idzi nhatu kubva musi weMuvhuro kusvika Chishanu nenguva dza8:00 a.m. kusvika na4:00 p.m. Vaenzi vachanakidzwawo nekuratidzwa zvinoitwapo nemumwe munhu kwemaminitsi 20 vachiona Mahofisi neServices Building uye dzimwewo nzvimbo dziri paBheteri. Izvi zvichange zvichiitwa kubva Muvhuro kusvika Chishanu nenguva dza8:00 a.m. kusvika na11:00 a.m. uye 1:00 p.m. kusvika na4:00 p.m.
Musati maronga mafambiro amuchaita, endai pajw.org motarisa pakanzi NEZVEDU > MAHOFISI UYE KURATIDZWA ZVINOITWAPO > United States.
Vanhu vaimboshanda paBheteri vakachinja sei mararamiro avo kuti aenderane neupenyu hutsva hwekundima?
Pakupera kwevhiki musi wa7 na8 May, 2016, vanhu vakakokwa kuti vauye kuzoona zvaiva paBheteri rekuBrooklyn, kusanganisira maBhaibheri ekare kare ayo akapa uchapupu hwakanaka kuvavakidzani.
Muna January 2016, maitirwo emusangano weungano wepakati pevhiki akachinjwa pasi rese.
JW Broadcasting yakatanga muna 2014 uye yava kubuda mumitauro inopfuura 90. Vanhu vari kuiona sei?
Kutsaurirwa kwezvivako zvitsva zvemapazi ekuKyrgyzstan nekuArmenia zviitiko zvinofadza zvine chekuita nekunamata zvakaitika kuZvapupu zveko.
Inyaya dzei dzakapindira Zvapupu zvaJehovha mumatare muna 2016?
Mishumo yezvakaitwa neZvapupu zvaJehovha kuArgentina, Belize, Burundi, Congo (Kinshasa), Germany, Italy, Nepal, Papua New Guinea, uye Uganda.